4 qof oo looga shakiyay cudurka Coronavirus oo lagu karantiilay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta 4 qof oo looga shakiyay cudurka Coronavirus oo lagu karantiilay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Caafimaadka dowladda Soomaaliya Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay karantiishay Afar ruux oo ka yimid dalalka uu sameeyay Cudurka Coronovirus.
Mid ka mid ah dadkaasi ayaa ka yimid dalka Shiinaha, 10-kii Bishaan halka Saddexda kalena ay dalka soo gaareen Maanta sidda ay shaacisay Wasiirka.
Waxa ay sheegtay Soomaaliya inay dadaal ugu jirto sidii uusan u soo gaari laheyn xanuunkaasi, islamarkaana diyaaradaha duulimaadyada dalka u yimaado loo sheegay inaysan dalalka uu saameeyay xanuunkaan dad aysan ka soo qaadin.
Wasiirka Caafimaadka ayaa sheegtay Soomaaliya inay u nugushahay xanuunada kala duwan, sidoo kalena ay jiraan xanuuno dadka ay ka qaadaan maandooriyaha oo si sharcidaro ah dalka ku soo gala.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa shalay ku dhawaaqay in uu hadda jiro in kabadan 118,000 kiis oo COVID-19, cudurka uu sababay fayrasku, 114 dal oo adduunka ah.